नारायणगढ–मुग्लिन सडकको पहिरो | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
नारायणगढ–मुग्लिन सडकको पहिरो
२०७७ भाद्र ८, सोमबार १०:४६ गते
दैनिक हजारौँ सवारीसाधन आवतजावत गर्ने नारायणगढ–मुग्लिन सडकबाट करिब ७०५ भन्दा बढी व्यापारिक संवाहक हुने गरेको छ । ५.५ मिटर चौडाइ रहेको सडकलाई एसियाली मापदण्डअनुसार ९–११ मिटर फराकिलो बनाउने उद्देश्यले सन् २०१५ मा काम सुरू गरिएको थियो । गत वर्षमात्रै सडक फराकिलो बनाउने काम सम्पन्न भएको निर्माण कम्पनीले जानकारी दिएको थियो । मनसुन सुरू हुनेबित्तिकै यस सडक क्षेत्रमा अत्यधिक पहिरो खस्ने सम्भावना रहेको हुनाले यो सडकको नाम लिँदा धेरैको आङ जिरिङ्ग हुन्छ ।
पछिल्लो समय सडकको मुहार फेरिए पनि यो सडक हुँदै यात्रा गर्ने सर्वसाधारणहरुमा पहिरोको त्रास कायम नै छ । यो सडकको भौगर्भिक बनावट हेर्ने हो भने यसमा चुरे (सिवालिक) र लेसर हिमालयको भूभाग पर्दछ । सिवालिक मुख्य गरी पत्रे चट्टानहरुले बनेको छ । उचाइ बढेसँगसँगै सिवालिकपछि लेसर हिमालय सुरू हुन्छ । यो क्षेत्र पत्रे र परिवर्तित चट्टानहरुले बनेको छ । कमजोर भौगर्भिक बनावट भएको यो क्षेत्रमा दासढुङ्गानजिकै सिवालिक र लेसर हिमालय छुट्टयाउने एउटा मुख्य दरार छ । यस्तो मुख्य दरारसँगसँगै अन्य थुप्रै ससाना स्थानीय दरार वा चिराहरुले यहाँका पहाडहरुलाई थप कमजोर बनाइरहेका छन् । विज्ञहरुले गरेको अध्ययनअनुसार यस सडकखण्डमा अझै पनि सातवटा (गाईघाट, घुमाउने, भालुढुङ्गा, जलविरे, चारकिलो, तोपेखोला र कालिखोला) मुख्य पहिरोहरु सक्रिय अवस्थामा रहेको र जुनसुकै समयमा पनि खस्न सक्छ ।
किन पहिरो जान्छ यस क्षेत्रमा ?
यसको भौगर्भिक समस्या भनेकै कमजोर र खुकुलो प्रकृतिको भू–सतह नै हो । थोरै मिटरको दूरीमा पनि फरक–फरक विशेषताका भू–सतह रहेको यस क्षेत्रमा बढी मात्रामा कालो, रातो, कमेरो तथा ससाना ढुङ्गा मिसिएको माटो भेट्न सकिन्छ । उचाइ बढेसँगसँगै स्लेट, फिलाइट, क्वारजाइट, एम्फिबोलाइटजस्ता बलिया चट्टानहरु पनि भेट्न सकिन्छ । चट्टानहरुको आफ्नै चाप, ताप र शक्तिले गर्दा बाङ्गिने, भाँचिने र फुट्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ । बलिया र कमजोर चट्टानहरु तहतहमा मिलेर बसेका छन् । मनसुनको पानी छिरेर कमजोर चट्टानको तहलाई सजिलै गलाइदिने भएकाले बलियो चट्टानको तह चिप्लिने गर्छ, तर यो प्रक्रिया पहाड कत्तिको भिरालो छ भन्नेमा पनि भर पर्छ । भूगर्भविद्हरुको अनुसन्धानका अनुसार यस सडकखण्डअन्तर्गत तीन किसिमका पहिरोहरु जस्तैः रक स्लाइड, रक टोपल र डेब्रीज स्लाइडरफ्लो जान सक्ने भनिएको छ । बलिया चट्टानहरु भएको भूभागमा मुख्यतः रक टोपल हुने गरेको पाइन्छ । त्रिशूली नदीमा मिसिने जुगेडी खोला, दासढुङ्गा खोला र खहरे खोलाले पनि हरेक वर्षको मनसुनमा सडकलाई क्षति पु¥याउने गरी ठूलो मात्रामा डेब्रीज बगाएर ल्याउने गर्दछ ।
पर्याप्त भौगर्भिक र इन्जिनियरिङ अध्ययनबिना सडक विस्तारको काम सुरू गर्नाले आजको अवस्था निम्तिएको हो भन्ने यथार्थतालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसै त, संवेदनशील भू–सतह भएको यो क्षेत्रमा पहाडहरु काट्दा पहिरो नियन्त्रणको काम पनि समानान्तर तवरले हुनुपर्ने थियो, तर यो मानेमा निर्माण कम्पनी पनि चुकेकै हो भन्दा फरक नपर्ला । भू–संरचना र चट्टानहरुको विशेषता हेरेर ‘कटिङ स्लोप’को डिजाइन गर्ने गरिन्छ । यो विषयमा स्वयं निर्माण कम्पनीले नै आफ्नो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा अध्ययन अनुसन्धानको कमी भएको महसुस गरिसकेको छ । सडक विस्तारको काम सुरू भएको केही दिनमै गोरखा भूकम्पले थिलोथिलो पारेको यहाँका पहाडहरुलाई ट्रयाक खोल्दा गराइएको विस्फोट र ठूला–ठूला सवारीसाधनहरुले दिने पराकम्पहरुले पनि थप कमजोर बनाइरहेको छ ।
पहिरोलाई विशेषगरी मनसुनजन्य विपद्को रुपमा लिने गरिन्छ । भूक्षय र पहिरो खस्नका लागि पानीले मह¤वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । स्लोप कटिङ गर्दा र सडक निर्माण गर्दा पानीको उचित व्यवस्थापनका लागि विशेषरुपले सोच्नुपर्ने हुन्छ । तर विडम्बना ! वर्षाको पानीलाई व्यवस्थित ड्रेन गराउनका लागि आवश्यक संरचनाहरु बनाइएको देखिँदैन । जसले गर्दा मनसुन सुरू भएलगत्तै भित्रभित्रै पानी छिरेर पहाडहरुलाई गलाइरहेको छ । सडकमुनिबाट एङ्कर पर्खाल दिएर निर्माण गरिए पनि थुप्रै ठाउँमा सडक भासिएको छ । भूगर्भविद्हरुका अनुसार रातो कालो माटोले बनेका सिवालिकका पहाडहरुमा मुख्यतः ३ किसिमका खनिज माटो पाउन सकिन्छ– इलाइट, क्लोराइट र काओलिनाइट । जसमध्ये इलाइटलाई पानीले सजिलैसँग गलाउने भएकाले यसको मात्रा बढी भएको ठाउँमा पहिरो खस्न सक्ने सम्भावना पनि उच्च रहन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस्ता अनुसन्धानका विषयहरुलाई सम्बोधन नगर्नाले बर्सेनि पहिरोको सामना गरिरहनु परेको छ । अहिले देशैभरि स्थानीय सरकारहरुले ग्रामीण सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । यो क्षेत्रमा पनि ना–मु सडकखण्डलाई जोड्ने गरी थुप्रै ग्रामीण सडकहरु निर्माण भइरहेका छन् । बिना‘भौगर्भिक इन्जिनियरिङ’ धमाधम ‘डोजर इन्जिनियरिङ’ प्रयोग गरी निर्माण गरिएका यस्ता सडकहरुले पनि पहिरोको जोखिमलाई प्रश्रय दिइरहेको पाइन्छ ।
बर्सेनि पहिरोबाट ठूलो धनजनको क्षति हुँदै आएको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा पहिरो रोकथामको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आजको अपरिहार्यता हो । हरेक वर्ष राज्यले करोडौँ रकम यस क्षेत्रलाई विनियोजन गर्दै आइरहेको छ, तापनि समस्या जस्ताको तस्तै छ । इन्जिनियर, भूगर्भविद् र अन्य दक्ष प्राविधिकहरुबाट मिश्रित सूक्ष्म अध्ययन गरी जुगेडीदेखि मुग्लिनसम्मको भूभागमा पहिरो जान सक्ने ठाउँहरुको पहिचान गर्नुपर्छ । पहिचान गरिएका ठाउँहरुलाई जोखिमताको आधारमा अति उच्च जोखिम, उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम, न्यून जोखिम र अति न्यून जोखिम भनेर पुनः वर्गीकरण गर्नुपर्छ जसले गर्दा जोखिमअनुसार रोकथामका उपायहरु अपनाउन सकियोस् ।
नेपालमा हालसम्म पहिरोको पूर्वानुमान गर्ने कुनै पनि संयन्त्र र प्रविधि छैन । पहिरोबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न अति उच्च र उच्च जोखिम भएका ठाउँहरुमा पहिरो खस्नुअघि साइरन बज्ने प्रविधि जडान गर्न सकियो भने उत्तम हुन्छ । कम खर्चमा पहिरोसम्बन्धी सूचना दिने एउटा प्रविधि हो– ‘इन्क्लिनोमिटर’ । यो प्रविधिको जडानले पहिरोको हिँडाइको मात्रा, हिँडाइको दर, पहिरो हलचलको गहिराइ र ‘शियर जोन’को मोटाइका बारेमा पनि जानकारी दिने हुनाले पहिरोको आकार पत्ता लगाउन गरिने मोडेलिङमा पनि सहयोग पुग्छ । पहिरोको मुख्य मानक वर्षायामको पानी भएकोले ड्रेन बनाएर उक्त पानीको व्यवस्थापन गर्नु जरूरी छ । पानीको व्यवस्थापन गरिसकेपछि आवश्यक ठाउँ पहिचान गरी सडकको माथिल्लो भागमा ब्रेस्ट वाल र सडकको नदीतर्फको भागमा रिटेनिङ वाल, ग्याबियन वाल, टो वालजस्ता संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्छ जसले गर्दा माथिल्लो पहिरो जान सक्ने तहले तल्लो तहलाई निरन्तर दिइरहने चाप थेग्न सकोस् ।
मध्यम जोखिम भएका ठाउँहरुमा पनि बेलैमा रक बोल्टिङ, एङ्करिङ र नेटिङ गर्न सकियो भने पहिरो रोक्न सकिन्छ । उल्लेखित कामहरु हुँदै नभएका भने हैनन्, तर पर्याप्त अध्ययन नगरी र विज्ञहरुलाई समाहित नगरी गरिएका कामहरु दीर्घकालीन हुन कदापि सक्दैनन् । विगत २५ वर्षदेखि नेपालका पहाडहरुमा बायोइन्जिनियरिङको कन्सेप्ट अपनाउन थालिएको भएता पनि यो प्रविधिले मूर्तरुप पाउन भने सकिरहेको छैन । भू–संरक्षणका निम्ति नाङ्गो भिरालो र काटिएका पहाडहरुमा स्थानीयरुपमा पाइने र माटो राम्रोसँग समात्न सक्ने बिरूवाहरु जस्तै बाँस, नियालो, अम्रिसो लगाउनुपर्छ ।
अन्तमा, संघीय संरचनामा गइसकेको देशमा कुन क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा उक्त क्षेत्रको स्थानीय निकायले निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सडकखण्डको विपत्ति रोकथामको हकमा भरतपुर महानगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकाको संयुक्त योजना र नीतिको आवश्यक छ । सडक निर्माण गर्दा लागेको लागतभन्दा पहिरो रोकथामका लागि लाग्ने लागत स्वतः बढी हुने देखिन्छ । यस हकमा यहाँका स्थानीय निकायहरु नै सक्रियरुपमा जिम्मेवारी वहन गरी विज्ञहरुको अनुसन्धान र अनुरोधलाई सम्बोधन गर्दै वैज्ञानिक तवरले पहिरो रोकथामका प्रविधिहरु अवलम्बन नगर्ने हो भने अर्को दशकसम्म यही समस्या जीवितै रहने निश्चित प्रायः छ ।
(लेखकले इन्जिनियरिङ भूगर्भशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।)